Korehiko Hino sy ilay hafahafa amin'ny endrik'olombelona maha-saribakoly | Famoronana an-tserasera
Rehefa afaka vitsivitsy herinandro amin'ny hatsaran-tarehy sy ny fikasihan-tanana tsy mampino Amin'ny fampiasana fitaovana samihafa, toy ny mofomamy Romero, hiroso amin'ny hafahafa isika, ny mpampihorohoro ary ny fampihorohoroana Korehiko Hino.
Ny hatsaran-tarehy dia mampiseho amintsika ny lafiny mamirapiratra izay mety ho hitantsika amin'ny fiposahan'ny masoandro na amin'ny hafanana voalohany tonga miaraka amin'ny lohataona, fa amin'ny maizina sy ny manjombona mifanena aminy Ireo aloka amin'ny vanim-potoana mainty avy amin'i Goya na ireo sanganasa henjana nataon'i Hino. Asa tsy manaja sy manaitra noho io antony io izay tsy hanafenany singa mety hanelingelina sy hanala ny feon'ny fieritreretana sy ny toerana.
Korehijo Hino dia mpanakanto japoney monina any Tokyo izay Manintona ny mpijery ny sary hafahafa mankamin'ny asa maizina, feno firaisana ara-nofo sy tsy fahalalam-pomba ao aminy ihany.
Sarin'olombelona toa ny saribakoly namely ny fihetsik'izy ireo izy ireo ary bika aman'endriny. Ny fizarana sy ny vatany dia mitazona ny lahy sy ny vavy, na vavy na lahy. Hino dia mamorona fahatsapana hazavana maivana fa manafina eritreritra sy fihetseham-po maizina. Toy ny ao amin'ny World's Brave New Huxley, dia afaka mahita nuansa vitsivitsy amin'ny famirapiratana mametraka antsika eo alohan'ireto saribakoly ireto izay eo imasony lehibe sy ny fihetsika ataon'izy ireo dia mampangina anay vetivety.
Tsaroako ny kanton'ny Yannick de la Pêche miaraka amin'io fikomiana io ary mikaroha endrika tsy miendrika endrika ary manalavitra ny tsara tarehy ka hatramin'ny maloto miaraka amin'ny zanany lahy ratsy tarehy.
Hino, miaraka amin'ireo sary hosodoko miaraka amin'ireo maso lehibe tsy mipipy, mitondra antsika amin'ny tantara an-tsehatra sy ny resaka azo antoka. Mangatsiaka ary mikaroha fihetseham-po hafa, na angamba tsy te handalo eto.
Ianao dia manana ny tranonkalanao manokana hanaraka ny sanganasa sy ny fampirantiany. Mpanao hosodoko hanaraka ny fahitana anao ary ho an'ny fomba hafahafa misy fiantraikany amin'ny mpijery izay mandalo alohan'ny asany kanto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo endrika maha-olombelona hafahafa an'i Korehiko Hino